Ushukela omningi ngesikhathi sokukhulelwa: imiphumela enganeni nakumama okhulelwe > Izinhlobo Nezinhlobo
Isifo sikashukela sokukhulelwa lapho ukhulelwe: okudingeka ukwazi
Kusukela ngosuku lokuqala lokukhulelwa nangesikhathi sokuzala, umzimba wowesifazane usebenza ngendlela ehluke ngokuphelele.
Ngalesi sikhathi, izinqubo ze-metabolic zingase zingasebenzi kahle, futhi amaseli angalahlekelwa umuzwa we-insulin. Ngenxa yalokhu, i-glucose ayidonswa ngokuphelele, futhi ukuqina kwayo emzimbeni kukhuphuka kakhulu.
Lokhu kusongela ukuthuthukiswa kwezinkinga ezinkulu kakhulu. Ngakho-ke, iyiphi ingozi ushukela ophezulu ngesikhathi sokukhulelwa.
Imvamisa yeglucose egazini labesifazane abakhulelwe
Izinkomba ze-carbohydrate metabolism kwabesifazane abakhulelwe banezindinganiso zabo.
Isikhathi sokuqala lapho owesifazane enza ukuhlolwa kwegazi ezinsukwini zokuqala, futhi inkomba (esiswini esingenalutho) kufanele igcinwe ngaphakathi kwebanga le-4.1-5.5 mmol / l.
Ukunyusa amanani kuya ku-7.0 mmol / l noma ngaphezulu kusho ukuthi umama okhulelwe ukhule ngesifo sikashukela esisongelayo (i-expression), okungukuthi, sitholakala esikhathini se-perinatal. Lokhu kusho ukuthi ngemuva kokuzalwa lesi sifo siyohlala, futhi sisalashwa.
Lapho amanani kashukela egazini (futhi esiswini esingenalutho) ehambelana no-5.1-7.0 mmol / l - owesifazane unesifo sikashukela sokukhulelwa. Lesi sifo sibonisa kuphela abesifazane abakhulelwe, futhi ngemuva kokubeletha, njengomthetho, izimpawu ziyanyamalala.
Uma ushukela uphezulu, kusho ukuthini?
Amanyikwe (ama-pancreas) unesibopho sale nkomba.
I-insulin ekhiqizwa yi-pancreas isiza i-glucose (njengengxenye yokudla) ukudonswa amaseli, nokuqukethwe kwayo kusegazini, ngokufanele, kuyancipha.
Abesifazane abakhulelwe bane-hormone yabo ekhethekile. Umphumela wabo uphikisana ngqo ne-insulin - bakhulisa amanani eglucose. Lapho ama-pancreas eyeka ukwenza umsebenzi wawo ngokuphelele, kuba negxili ngokweqile.
Isifo sikashukela sokukhulelwa sikhula ngesikhathi sokukhulelwa ngenxa yezizathu eziningana:
Emizimbeni yethu, i-insulin ibhekele ukuthathwa koshukela ngamangqamuzana. Engxenyeni yesibili yokukhulelwa, ukukhiqizwa kwama-hormone okwenza buthaka ukusebenza kwawo kuyathuthukiswa. Lokhu kuholela ekunciphiseni kokuzwela kwezicubu zomzimba sowesifazane ukuya ku-insulin - ukumelana ne-insulin.
Ukondla okwedlulele kowesifazane kuholela ekwandeni kwesidingo se-insulin ngemuva kokudla.
Njengomphumela wokuhlanganiswa kwalezi zinto ezimbili, amaseli we-pancreatic ahluleka ukukhiqiza inani elanele le-insulin, bese kuba nesifo sikashukela sokukhulelwa.
Akuwona wonke umuntu wesifazane okhulelwe onengozi yokuba nesifo sikashukela. Kodwa-ke, kunezici ezandisa lokhu. Zingahlukaniswa yilezo ezazikhona ngaphambi kokukhulelwa futhi zenzeka phakathi nayo.
Ithebula - Izici zobungozi zesifo sikashukela sokukhulelwa
Izici Zangaphambi Kokukhulelwa
Izici Ngesikhathi Sokukhulelwa
Iminyaka engaphezu kuka-30 Izithelo ezinkulu
Ukukhuluphala ngokweqile noma ngokweqile Ama-Polyhydramnios
Isifo sikashukela esihlobene emndenini oseduze I-urinary glucose excretion
Isifo sikashukela sokukhulelwa ekukhulelweni kwangaphambilini Ukhuluphele Ngesikhathi Sokukhulelwa
I-gestosis yokuqala noma sekwephuzile ekukhulelweni kwangaphambilini Ukuphazamiseka kokuzala kwe-fetus
Ukuzalwa kwezingane ezinesisindo esifinyelela ku-2500 g noma ngaphezulu kuka-4000 g
Ukuzalwa kabusha, noma ukuzalwa kwezingane ezinokukhubazeka kokukhula esikhathini esedlule
Ukuphuphuma kwesisu, ukuphuphuma kwesisu, ukukhipha isisu okwedlule
Kumele kukhunjulwe ukuthi i-glucose ingena kwengane nge-placenta. Ngakho-ke, ngokukhuphuka kwezinga lakhe egazini likamama, ukungezelela kufinyelela enganeni. Ama-pancreas we-fetus asebenza ngemodi ethuthukisiwe, akhipha inani elikhulu le-insulin.
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kwenziwa ngezigaba eziningana. Owesifazane ngamunye, lapho ebhalisela ukukhulelwa, wenza ukuhlolwa kwegazi nge-glucose. Izinga likashukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe lisuka ku-3.3 liye ku-4,4 mmol / L (egazini lisuka emunweni), noma lifike ku-5.1 mmol / L egazini le-venous.
Uma owesifazane engoweqembu elisengozini enkulu (enezici ezi-3 noma ngaphezulu zobungozi ezifakwe ngaphezulu), unikezwa ngomlomo isivivinyo sokubekezelela ushukela (PGTT). Ukuhlolwa kuqukethe lezi zinyathelo ezilandelayo:
Owesifazane osesiswini esingenalutho unikeza igazi nge-glucose.
Ngemuva kwalokho, kungakapheli imizuzu emi-5, isisombululo esine-75 g ye-glucose sidakiwe.
Ngemuva kwamahora 1 no-2, kuzanywa ukuphindwaphindwa kwezinga le-glucose egazini.
Amanani kashukela egazini le-venous abhekwa njengejwayelekile:
esiswini esingenalutho - ngaphansi kuka-5.3 mmol / l,
ngemuva kwehora eli-1 - ngaphansi kwe-10.0 mmol / l,
ngemuva kwamahora ama-2 - ngaphansi kwama-8.5 mmol / l.
Futhi, kwenziwa isivivinyo sokubekezelela i-glucose kwabesifazane abanokwenyuka kokuzila ushukela wegazi.
Isigaba esilandelayo ukuqaliswa kwe-PHTT kubo bonke abesifazane abakhulelwe esikhathini esingamaviki angama-24- 28.
Ekutholakalweni kwe-mestitus ye-gestationalabetes mellitus, kusetshenziswa inkomba ye-glycated hemoglobin, ekhombisa izinga likashukela egazini ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Imvamisa, ayidluli ku-5.5%.
I-GDM itholakala ne:
Ijubane likashukela likhulu kune-6.1 mmol / L.
Noma yikuphi ukunqunyelwa okungahleliwe kwe-glucose uma ingaphezu kuka-11.1 mmol / L.
Uma imiphumela ye-PGTT idlula okujwayelekile.
Izinga le-hemoglobin ye-glycated liyi-6.5% noma ngaphezulu.
Imvamisa, isifo sikashukela sokukhulelwa asymptomatic. Owesifazane akakhathazeki, futhi ukuphela kwento eyenza ukuthi i-gynecologist ikhathazeke izinga elikhuphukayo le-glucose egazini.
Ezimweni ezibucayi kakhulu, ukoma, ukuchama ngokweqile, ubuthakathaka, i-acetone yomchamo iyatholakala. Owesifazane uthola isisindo ngokushesha kunalokho obekulindelwe. Lapho wenza ukuhlolwa kwe-ultrasound, kutholwa kusengaphambili ekuthuthukisweni kwe-fetus, izimpawu zokungapheleli kokugeleza kwegazi kwe-placental.
Ngakho-ke iyini ingozi yesifo sikashukela sokukhulelwa, kungani i-glucose ngesikhathi sokukhulelwa inakwa kangaka? Isifo sikashukela esikhulelwe siyingozi ngemiphumela yaso kanye nezinkinga zabesifazane nezingane.
Izinkinga zesifo sikashukela sokukhulelwa kowesifazane:
Ukukhipha isisu okuzenzakalelayo. Ukwanda kokuvama kokukhipha isisu kwabesifazane abane-GDM kuhlotshaniswa nokutheleleka njalo, ikakhulukazi kwezitho ze-urogenital. Ukuphazamiseka kweHormonal nakho kubalulekile, ngoba isifo sikashukela sokukhulelwa sivame ukwanda kwabesifazane abane-polycystic ovary syndrome ngaphambi kokukhulelwa.
I-Lest gestosis (edema, umfutho wegazi ophakeme, amaprotheni omchamo engxenyeni yesibili yokukhulelwa). Isifo sokuqina esishubile siyingozi empilweni yabesifazane nengane, singaphumela ekuqulekeni, ekulahlekelweni yimizwa, ukopha kakhulu.
Izifo ezijwayelekile zomgudu womchamo.
Emazingeni aphezulu eglucose, ukulimala emithanjeni yamehlo, yezinso, neplacenta kungenzeka.
Umsebenzi we-preterm uvame ukuhlotshaniswa nezinkinga zokukhulelwa ezidinga ukulethwa kwangaphambili.
Izinkinga zokuzalwa kwengane: ubuthakathaka bokubeletha, usizi lomsele wokubeletha, ukuphuma kwegazi kwangemva kokubeletha.
Umphumela wesifo sikashukela sokukhulelwa kuzingane:
I-Macrosomy isisindo esikhulu yosanda kuzalwa (ngaphezu kwama-4 kg), kepha izitho zomntwana azimdala. Ngenxa yokunyuka kwamazinga e-insulin egazini le-fetus, i-glucose eyeqile ifakwa njengamafutha angaphansi. Ingane izalwa inkulu, inezihlathi eziyindilinga, isikhumba esibomvu, amahlombe abanzi.
Intuthuko ebambezelekile engabambezeleka.
Ukungasebenzi kahle kwe-Congenital kuvame kakhulu kwabesifazane abanamazinga aphezulu kashukela egazini ngesikhathi sokukhulelwa.
I-Hypoxia yengane. Ukuze uthuthukise izinqubo ze-metabolic, i-fetus idinga i-oksijini, futhi ukungena kwayo kuvame ukukhawulelwa ukwephulwa kokugeleza kwegazi kwe-placental. Ngokuntuleka komoya-mpilo, indlala yomoya-mpilo, i-hypoxia iyenzeka.
Ukuphazamiseka kokuphefumula kwenzeka kaningi izikhathi ezingama-5-6. I-insulin engaphezulu egazini lengane ivimbela ukwakheka kwe-surrocant - into ekhethekile evikela amaphaphu engane ngemuva kokuzalwa kwengane.
Kaningi, ukufa kwengane kwenzeka.
Ukulimala enganeni ngesikhathi sokubeletha ngenxa yobukhulu obukhulu.
Amathuba aphezulu we-hypoglycemia ngosuku lokuqala emva kokuzalwa. I-Hypoglycemia ukuncipha kwe-glucose yegazi ngaphansi kuka-1.65 mmol / L kusanda kuzalwa. Ingane ilele, i-lethargic, ivinjelwe, imunca kabi, ngokwehla okunamandla kwe-glucose, ukulahleka kwengqondo kungenzeka.
Isikhathi sobuntu siqhubeka nezinkinga. Amazinga akhuphukayo we-bilirubin, izifo ezibangelwa amagciwane, ukuqina kwemizwa yezinzwa.
Ukwelashwa kuyisihluthulelo sempumelelo!
Njengoba sekucacile manje, uma isifo sikashukela sitholwa ngesikhathi sokukhulelwa, kumele selashwa! Ukwehlisa amazinga kashukela egazi kusiza ukunciphisa izinkinga futhi kubelethe umntwana onempilo.
Owesifazane onesifo sikashukela sokukhulelwa kudingeka afunde ukuthi angazilawula kanjani i-glucose level yakhe ene-glucometer. Qopha zonke izinkomba kudayari, bese uvakashela njalo i-endocrinologist.
Isisekelo sokwelashwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa ukudla. Umsoco kufanele ube njalo, amahlandla ayisithupha, ucebile ngamavithamini nezakhi zomzimba. Kuyadingeka ukukhipha ama-carbohydrate acwengekile (imikhiqizo equkethe ushukela - uswidi, ushokoledi, uju, amakhukhi, njll.) Futhi udle i-fiber ethe xaxa equkethe imifino, i-bran nezithelo.
Udinga ukubala amakhalori futhi ungadli ngaphezu kwesilinganiso esingu-30- 35 kcal / kg sesisindo somzimba ngosuku kusisindo esijwayelekile. Uma owesifazane ekhuluphele, lesi sibalo sincishiswa sibe ngama-25 kcal / kg wesisindo ngosuku, kepha singeqi ngaphansi kwe-1800 kcal ngosuku. Ama-Nutrients asatshalaliswa kanjena:
Akunjalo, uma kufanele ulambe. Lokhu kuzosithinta isimo sengane!
Ngesikhathi sokukhulelwa, umuntu wesifazane kufanele angabi ngaphezu kwesisindo esingu-12 kg, futhi uma ebkhuluphele ngaphambi kokukhulelwa - kungabi ngaphezu kwama-8 kg.
Kuyadingeka ukwenza ukuhamba kwansuku zonke, ukuphefumula umoya omusha. Uma kungenzeka, yenza i-aerobics yamanzi noma i-aerobics ekhethekile kwabesifazane abakhulelwe, yenza izivivinyo zokuphefumula. Ukuzivocavoca kusiza ukunciphisa isisindo, ukunciphisa ukumelana ne-insulin, ukukhulisa ukunikezwa komoya-mpilo we-fetus.
Ukudla nokuzivocavoca kusetshenziswa amasonto amabili. Uma phakathi nalesi sikhathi okwejwayelekile kwezinga likashukela wegazi kungenzeki, udokotela uzoncoma ukuqala imijovo ye-insulin, ngoba izidakamizwa ezinciphisa ushukela wethebhulethi ziyaphikiswa ngesikhathi sokukhulelwa.
Akunasidingo sokwesaba i-insulin ngesikhathi sokukhulelwa! Kuphephile ngokuphelele kuzingane, akumthinti kabi umfazi, futhi kuzokwazi ukuyeka imijovo ye-insulin ngokushesha ngemuva kokubeletha.
Lapho bechaza i-insulin, bazokuchaza ngokuningilize nokuthi bayijovele kanjani, kanjani ukuthi bawuthole kanjani umthamo odingekayo, ukuthi ungalawula kanjani amazinga kashukela egazini kanye nesimo sakho, nokuthi ungakugwema kanjani ukwehla ngokweqile kwe-glucose egazini (hypoglycemia). Kuyadingeka ukulandela ngokuqinile izincomo zikadokotela kulezi zindaba!
Kepha ukukhulelwa sekuzophela, ngakho-ke yini elandelayo? Kuzoba yini ukuzalwa?
Abesifazane abanesifo sikashukela sokukhulelwa basizala ngempumelelo. Ngesikhathi sokubeletha, ushukela wegazi uyaqashwa. Izithinteli zokubeletha ziqapha isimo sengane, zilawule izimpawu ze-hypoxia. Isidingo sokuzalwa kwemvelo usayizi omncane we-fetus, isisindo sayo akufanele sibe ngaphezulu kwe-4000 g.
Isifo sikashukela sokutholwa sisodwa asibonisi isigaba se-Caesarean. Kodwa-ke, imvamisa ukukhulelwa okunjalo kuyinkimbinkimbi nge-hypoxia, i-fetus enkulu, i-gestosis, umsebenzi obuthakathaka, okuholela ekulethweni kokuhlinzwa.
Esikhathini sokubeletha, ukubhekelwa kukamama nengane kuzobolekwa. Njengomthetho, amazinga kashukela abuyela kokujwayelekile emavikini ambalwa.
Emavikini la-6 ngemuva kwekutalwa, umuntfu kufanele afike ku-endocrinologist aphindze enze luhlolo lwekulubekezelela lwe-glucose. Kaningi, izinga likashukela lijwayelekile, kodwa kwezinye iziguli lihlala liphakeme. Kulokhu, lona wesifazane utholakala ukuthi unesifo sikashukela kanti ukwelashwa okudingekayo kuyenziwa.
Ngakho-ke, ngemuva kokubeletha, owesifazane onjalo kufanele enze yonke imizamo yokunciphisa isisindo somzimba, adle njalo nangokufanele, futhi athole umsebenzi owanele womzimba.
Siyini isifo sikashukela?
Isifo sikashukela isifo sikashukela yisifo sohlelo lwe-endocrine, oluhambisana nokungapheleli ngokuphelele noma okuhlobene ne-insulin - i-hormone yamanyikwe, okuholela ekwandeni kweglucose yegazi - i-hyperglycemia. Ngamafuphi, i-gland engenhla ivele iyeke ukwenza i-insulin esetshenzisiwe, esebenzisa i-glucose engenayo, noma i-insulin ikhiqizwe, kepha izicubu zimane nje zenqabe ukuyemukela. Kunama-subspecies ambalwa alesi sifo: thayipha i-1 mellitus noma i-mellitus yesifo sikashukela esincike ku-insulin, uhlobo 2 sikashukela kanye ne-mellitus yesifo sikashukela esingaxineli ku-insulin kanye nesifo sikashukela esihlasela ngokwesifo sikashukela.
Uhlobo 1 lwesifo sikashukela i-mellitus, esibizwa ngokuthi yi-insulin, sincipha ngenxa yokubhujiswa kwama-islets akhethekile - izikebhe zama-Langerhans ezikhiqiza i-insulin, okuholela ekwakhiweni kokuntuleka kwe-insulin okuphelele okuholela ku-hyperglycemia futhi kudinga ukuphathwa kwehomoni kusuka ngaphandle isebenzisa amasirinji akhethekile e-"insulin".
Thayipha isifo sikashukela sesi-2
Uhlobo 2 lwesifo sikashukela i-mellitus, noma esinga-insulin, ayihambisani noshintsho oluhlelekile kumanyikwe, okuwukuthi, i-insulin ye-hormone iyaqhubeka nokwenziwa, kepha lapho kuhlangana khona izicubu, kuvela ukuthi "ukungasebenzi kahle", okungukuthi, izicubu aziboni nge-insulin ngakho-ke i-glucose ayisetshenziswa. Zonke lezi zehlakalo ziholela ku-hyperglycemia, edinga ukusetshenziswa kwamacwecwe anciphisa ushukela.
Isifo sikashukela nokukhulelwa
Kwabesifazane abanesifo sikashukela, umbuzo uvame ukuvela wokuthi ukukhulelwa kuzoqhubeka kanjani kuhlangene nesifo sabo. Ukuphathwa kokukhulelwa komama abakhulelwe abanesifo sokuxilongwa kwesifo sikashukela kwehla nokulungiselela ngokucophelela ukukhulelwa nokuhambisana nayo yonke imiyalo kadokotela kuyo yonke imibandela yayo: ukwenza izifundo zokuhlola okwenziwa ngesikhathi esifanele, ukuthatha izidakamizwa ezokwehlisa amazinga eglucose egazini, kanye nokubambelela ekudleni okukhethekile kwe-carb ephansi. Ngohlobo 1 sikashukela, ukuphoqelelwa kokudonswa kwe-insulin kusuka ngaphandle kuyadingeka. Umehluko kumthamo wayo uyahluka ngokuya nge-trimester yokukhulelwa.
Kwi-trimester yokuqala, isidingo se-insulin siyancipha, ngoba kwakhiwa i-placenta ehlanganisa ama-hormone e-steroid futhi iwuhlobo lwe-analogue yamanyikwe. Futhi, ushukela uwumthombo oyinhloko wamandla we-fetus, ngakho-ke amanani ayo asemzimbeni womama ancishisiwe. Kwi-trimester yesibili, isidingo se-insulin siyanda. I-trimester yesithathu imakwe ukuthambekela kokwehla kwezidingo ze-insulin ngenxa ye-fetus hyperinsulinemia, okungaholela ku-hypoglycemia kamama. Uhlobo 2 sikashukela i-mellitus ngesikhathi sokukhulelwa kudinga ukuqedwa kwamathebhulethi emithi enciphisa ushukela kanye nokuqokwa kwe-insulin therapy. Ukudla okuphansi kuma-carbohydrate kuyadingeka.
Isifo sikashukela sokutholwa kwesisu
Kuyo yonke impilo, umuntu wesifazane kungenzeka angaphazanyiswa ukuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism, izinkomba ekuhlaziyeni zingaba semkhawulweni ojwayelekile, kepha lapho kudlula izivivinyo emtholampilo wokukhulelwa, isifo esifana nesifo sikashukela sokukhulelwa sitholakala okokuqala isimo lapho kukhulelwa futhi kutholakala okokuqala ngqa ngesikhathi sokukhulelwa kanye ukudlula ngemuva kokubeletha. Ikhula ngenxa yokungalingani kwe-hormonal okuhambisana nokuthuthukiswa kwesibeletho emzimbeni wowesifazane ngokumelene nesizinda sokumelana kwe-insulin okukhona, ngokwesibonelo, ngenxa yokukhuluphala.
Izimbangela zesifo sikashukela sokukhulelwa zingaba:
ukuba khona kwesifo sikashukela ezihlotsheni
ukutheleleka ngegciwane okuthinta futhi kukhubaza umsebenzi we-pancreatic,
abesifazane abane-ovary polycystic,
abesifazane abahlushwa umfutho wegazi ophakeme
abesifazane abangaphezu kweminyaka engama-45,
abesifazane abasebenzisa kabi utshwala
abesifazane abanomlando wesifo sikashukela sokukhulelwa,
izithelo ezinkulu. Zonke lezi zinto zisengozini yokuqhamuka nale pathology.
Ukuphikiswa kwe-insulin kuvela ezintweni ezifana:
ukwanda okwandisiwe ku-cortex ye-adrenal ye-cortisol ye-contra-hormonal,
ukwakheka kwama-hormone e-placental steroid: ama-estrogens, ama-lactogen e-placental, i-prolactin,
kusebenze kwe-enzyme ye-placental ephula i-insulin - insulinase.
I-Symbomatology yalesi sifo ayicacile: kuze kube isonto lama-20, futhi lesi yiso kanye isikhathi lapho ukutholakala kwesifo sikashukela sezomzimba kungenzeka, owesifazane akakhathazeki. Ngemuva kwesonto lama-20, uphawu oluphambili ukwanda kwe-glucose yegazi, ebingakaze ibonwe phambilini. Kunganqunywa kusetshenziswa isivivinyo esikhethekile esithola ukubekezelela ushukela. Okokuqala, igazi lithathwa emthanjeni esiswini esingenalutho, khona-ke owesifazane uthatha u-75 g we-glucose ovinjwe emanzini bese igazi lithathwa emthanjeni futhi.
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kusungulwa uma izinkomba zokuqala zingaphansi kuka-7 mmol / L, kuthi owesibili ungabi ngaphansi kuka-7.8 mmol / L. Ngaphezu kwe-hyperglycemia, izimpawu ezinjengomuzwa wokoma, ukwanda kokuchama, ukukhathala, kanye nesisindo esingalingani kungajoyina.
Ukuvikela Isifo Sikashukela Ngesikhathi Sokukhulelwa
Ukuze unciphise ubungozi bokuthola i-mellitus yesifo sikashukela somzimba, kudingeka umsebenzi owanele womzimba - ukwenza i-yoga noma ukuya echibini yisisombululo esihle kakhulu sabesifazane abasengozini. Ukunakwa ikakhulukazi kufanele kukhokhwe ekudleni. Ukusuka ekudleni, kuyadingeka ukuthi ungabandakanyi imikhiqizo ethosiwe, enamafutha nefulawa, okuyizimoto ezisheshayo - le mikhiqizo ithathwa ngokushesha futhi inomthelela ekwandeni okubukhali futhi okubalulekile kwe-glucose yegazi, ukulethwa okuncane kwezakhi kanye nenani elikhulu lama-kilojoule athinta kabi umzimba.
Ukudla okunosawoti kufanele kungafakwa ekudleni kwakho, ngoba usawoti ugcina uketshezi, okungaholela ku-edema nomfutho wegazi ophakeme. Ukudla okune-fibre okucebile kuyingxenye ebalulekile yokudla kwabanesifo sikashukela, ikakhulukazi abesifazane abanesifo sikashukela sokukhulelwa. Iqiniso ngukuthi i-fiber, ngaphezu kokuba namandla amaningi wamavithamini namaminerali, ivuselela umgudu wesisu, yehlisa ukufakwa kwe-carbohydrate nama-lipids egazini.
Faka izithelo, imifino, imikhiqizo yobisi, amaqanda ekudleni kwakho. Udinga ukudla ngezingxenye ezincane, ukudla okulingene kahle kudlala enye yezindima eziphambili ekuvinjelweni kwesifo sikashukela. Futhi, ungakhohlwa nge-glucometer. Leli ithuluzi elihle lokulinganisa nsuku zonke nokulawulwa kwamazinga kashukela.
Ukuzalwa kwemvelo noma isigaba se-cesarean?
Le nkinga cishe ihlala njalo ihlangana nodokotela lapho bebhekene nowesifazane okhulelwe onesifo sikashukela. Ukuphathwa kwabasebenzi kuncike ezicini eziningi: isisindo esilindelwe se-fetus, imingcele ye-pelvis kamama, izinga lokuncephezwa kwalesi sifo. Isifo sikashukela sokutholwa uqobo asiyona inkomba yesigaba se-cesarean noma ukulethwa kwemvelo kuze kube amasonto angama-38. Ngemuva kwamaviki angama-38, amathuba okuthola izinkinga awagcini kumama kuphela, kodwa nakuzo fetus.
Ukulethwa ngokwakho.Uma ukuzalwa kwenzeka ngokwemvelo, lapho-ke ukulawula ama-glucose egazini kuyenzeka njalo emahoreni ama-2 ngokuphathwa kwe-insulin, okwenziwa isikhashana, uma ngesikhathi sokukhulelwa bekukhona isidingo sawo.
Isigaba seCesarean.Ukutholwa yi-ultrasound ye-macrosomia ebalulekile ye-fetus ekuxilongeni i-pelvis emincane yomtholampilo kumama, ukubola kwesifo somzimba wesifo sikashukela kokubeletha kuyizimpawu zesigaba se-cesarean. Kuyadingeka futhi ukuthi ubhekele izinga lesinxephezelo sikashukela i-mellitus, ukuvuthwa komlomo wesibeletho, isimo nosayizi wombungu. Ukuhlola amazinga eglucose kumele kwenziwe ngaphambi kokuhlinzwa, ngaphambi kokususa ingane, nangemva kokuhlukaniswa kwe-placenta bese kuthi njalo emva kwamahora ama-2 lapho amazinga wokuqondisa afinyelelwe futhi ngehora uma kungenzeka ukuthuthukiswa kwe-hypo- ne-hyperglycemia.
Izinkomba eziphuthumayo zesigaba se-cesarean ezigulini ezinesifo sikashukela zihlukaniswa:
ukuthikamezeka okubukhali kwesimo sokukhula kwesifo sikashukela nge-retinopathy engaba khona,
ukwanda kwezimpawu zesifo sikashukela se-nephropathy,
ukopha okungahle kudalwe ukuphazamiseka kwe-placental,
ingozi enkulu kuzingane.
Uma ukulethwa kwenzeka isikhathi esingaphansi kwamaviki angama-38, kuyadingeka ukuhlola isimo sohlelo lokuphefumula lwesibeletho, okungukuthi izinga lokuvuthwa kwamaphaphu, ngoba ngalesi sikhathi uhlelo lwe-pulmonary alukakhiwa ngokuphelele, futhi uma umbungu ungasuswanga kahle, kungenzeka ukuthi uvuse usizi lokuzalwa okusha kuye. Kulokhu, ama-corticosteroids anqunyelwe ukuthi asheshise ukukhula kwamaphaphu, kepha abesifazane abanesifo sikashukela badinga ukuthatha le mishanguzo ngokucophelela futhi ezimweni ezihlukile, ngoba basiza ukwandisa amazinga eglucose egazini, ukumelana nezicubu kukhuphuka kwe-insulin.
Iziphetho ezivela endatshaneni
Ngakho-ke, isifo sikashukela, nganoma yiluphi uhlobo, asiyona "i-taboo" yowesifazane. Ukulandela ukudla, ukwenza umsebenzi wokuzivocavoca osebenzayo kwabesifazane abakhulelwe, ukuthatha izidakamizwa ezikhethekile kuzonciphisa ubungozi bezinkinga, ukuthuthukisa inhlala-kahle yakho futhi kunciphise namathuba okukhula kabi kwezisu.
Ngendlela efanele, ukuhlela ngokucophelela, imizamo ehlanganyeli yabezokubelethisa, ama-endocrinologists, ama-diabetesologists, ama-ophthalmologists nabanye ochwepheshe, ukukhulelwa kuzoqhubeka ngendlela ephephile kubo bobabili umama okhulelwe nengane.
Isifo sikashukela sokuhluka sihluka kanjani kushukela weqiniso
Isifo sikashukela sokutholwa kwabesifazane abakhulelwe yisifo esibonisa ushukela wegazi ophezulu (kusuka ku-5.1 mmol / L kuya ku-7.0 mmol / L). Uma izinkomba zingaphezu kuka-7 mmol / l, khona-ke sikhuluma ngesifo sikashukela, esingahambi ngokuphela kokukhulelwa.
Ukuthola i-GDM ngaphambi nangemva kokuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose yomlomo (ikhambi le-glucose lidakiwe emxinwa othile), kuhlolwa igazi kuthathwe emithanjeni - okuqukethwe kweglucose kukalwa nge-plasma, ngakho-ke, ukuhlolwa kwegazi kusuka emunweni akunangqondo.
Ukuze udokotela ahlole isifo sikashukela sokukhulelwa, ukwedlula nje ushukela ojwayelekile kwanele.
Izizathu zangempela zokuvela kwesifo sikashukela wokuthomba azaziwa namhlanje, kodwa ochwepheshe bathi ukuthuthuka kwalesi sifo kungadalwa yilezi zingozi ezilandelayo:
ifa (uhlobo II lwesifo sikashukela emndenini osheshayo, izifo ze-autoimmune),
i-glycosuria kanye ne-prediabetes
izifo ezibangela izifo ze-autoimmune,
ngeminyaka. Ingozi yesifo sikashukela sokukhulelwa kowesifazane ngemuva kweminyaka engama-40 iphakeme izikhathi eziphindwe kabili kunalezo ezizalwa ngumama eminyakeni engama-25 kuye kwengama-30,
ukukhonjwa kwe-GDM ekukhulelweni kwangaphambilini.
I-Anastasia Pleshcheva: “Ingozi ye-GDM inyuka ngenxa yokuba khona ngokweqile, ukukhuluphala kwabesifazane ngaphambi kokukhulelwa. Kungakho sincoma ukuthi ulungiselele ukukhulelwa ngaphambi kwesikhathi futhi ulahle amakhilogremu angeziwe ngaphambi kokukhulelwa.
Inkinga yesibili okuqukethwe ngokweqile kwama-carbohydrate ekudleni. Ushukela ocwengekile kanye nama-carbohydrate agayekayo ayingozi kakhulu. ”
Kuyini ubungozi be-GDM
Ushukela owengeziwe ngegazi likamama udluliselwa kwi-fetus, lapho i-glucose iguqulwa ibe izicubu ze-adipose. Ifakwe kwizitho zengane nangaphansi kwesikhumba futhi ingashintsha ukukhula kwamathambo ne-cartilage, kuphazamise ukulingana komzimba wengane. Uma owesifazane eba nesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa, khona-ke umntwana osanda kuzalwa (kungakhathalekile ukuthi uzalelwe isikhathi esigcwele noma cha) ukhuphule isisindo somzimba nezitho zangaphakathi (isibindi, ama-pancreas, inhliziyo, njll).
U-Anastasia Pleshcheva: “Ukuthi ingane inkulu kakhulu akusho ukuthi izinkomba zayo zempilo zijwayelekile. Izitho zayo zangaphakathi zikhulisiwe ngenxa yezicubu ze-adipose. Kulesi simo, bakhiwe ngendlela encomekayo futhi abakwazi ukwenza imisebenzi yabo ngokugcwele.
I-glucose ethe xaxa nayo ingaphazamisa umsoco we-mineral metabolism - kuzoba nokungasebenzi okwanele kwe-calcium ne-magnesium emzimbeni kamama nengane - kuvuse ukuphazamiseka kwe-cardio-respiratory and neurological, kanye nokubanga i-jaundice kanye nokukhuphuka kokubonakala kwegazi enganeni.
Isifo sikashukela sokuzivocavoca sikhulisa ubungozi be-toxicosis sekwephuzile kowesifazane okhulelwe, okuyingozi kakhulu kune-toxicosis lapho ikhulelwe ekuqaleni.
Kepha ukwephulwa okungenhla nezinkinga kungenzeka ngokuxilongwa nokwelashwa okungafanele. Uma ukwelashwa kunqunyelwe futhi kugcinwa ngesikhathi, izinkinga zingagwenywa. ”
Ngabe i-GDM ingaphenduka iqiniso?
U-Anastasia Pleshcheva: “Uma owesifazane etholakale enesifo sikashukela sokukhulelwa, angagcina eba nesifo sikashukela sohlobo II. Ukukukhipha, emasontweni ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili ngemuva kokuzalwa, udokotela angakunikeza ukuhlolwa kwengcindezi ngo-75 g we-glucose. Uma kuvela ukuthi ngemuva kokuzalwa kowesifazane usenesidingo semithi equkethe i-insulin, khona-ke uchwepheshe angafika esiphethweni sokuthi ushukela usukhulile. Kulokhu, kufanele uthinte isazi se-endocrinologist ukuze uhlolwe futhi unikeze ukwelashwa okwanele. ”
Usizo lwezokwelapha nokuvimbela
Ngokusho kochwepheshe, zonke izinkinga zesifo sikashukela sokukhulelwa zingavinjelwa. Isihluthulelo sempumelelo ukuqapha amazinga kashukela wegazi kusukela ngesikhathi sokuxilongwa, ukwelashwa ngezidakamizwa kanye nokudla.
Kubalulekile ukungafaki ama-carbohydrate alula ekudleni - ushukela ocwengekile, amaswidi, uju, ujamu, amajusi emabhokisini nokuningi. Noma inani elincane lamaswidi libangela ushukela wegazi ophakeme.
Udinga ukudla ngokwamaqhezu (ukudla okuyi-main ezintathu kanye nezimbila ezimbili noma ezintathu) futhi ungekho lapho ulamba.
Kanye nokudla, ukusebenza ngokomzimba kuyadingeka futhi. Isibonelo, ukuhamba, ukubhukuda noma ukwenza i-yoga kwanele ukuba umzimba udonse ama-carbohydrate “ngokufanele”, ngaphandle kokuphakamisa izinga le-glucose egazini lifike ezingeni lenhlekelele.
Uma kungakapheli isonto noma amabili ukudla okunqunyelwe kwesifo sikashukela sokukhulelwa kungazange kube nemiphumela, udokotela angancoma ukwelashwa kwe-insulin.
Ngaphezu kwalokho, udinga ukulawula ngokuzimela izinga le-glucose (usebenzisa imitha izikhathi eziyisishiyagalombili ngosuku), isisindo futhi ugcine idayari yezempilo.
Uma kutholakale ukuthi i-GDS ikhulelwe esikhathini esidlule, futhi owesimame uhlela ukuba nengane futhi, ngaphambi kokukhulelwa kufanele alandele ngokushesha yonke imithetho yokuvikela iGDM.
Phambilini siphikise umbono wokuthi "kumele sidle okwababili" bese sikhipha ezinye izinganekwane ngokukhulelwa.